Invt Factory, mpamatsy - Mpanamboatra Invt China
Dingana tokana tokana 0.75-3KW MG
Ny INVT iMars MG andiana masoandro inverters dia novolavolaina ho an'ny trano onenana. Kely ny habeny, maivana ny lanjany, mora apetraka sy tazomina ary mandany vola be.
BG 40-70KW dingana telo
INVT iMars BG40-70kW on-grid inverter in-grid dia mamolavola ho an'ireo mpampiasa ara-barotra sy mizara tobin-kery eto an-tany. Izy io dia manambatra ny topolojika T telo ambaratonga avo lenta sy ny SVPWM (fanodikodinam-bolan'ny habakabaky ny habakabaka). Izy io dia manana hakitroka avo lenta, endrika maodely, fametrahana sy fikojakojana tsotra ary fampisehoana lafo vidy.
BN 1-2KW INVERTER GRID-OFF
Ny andiany iMars BN fotovoltaic tsy miankina amin'ny inverter in-jotra dia mandray ny asan'ny famatsiana herinaratra ivelan'ny tsipika nentim-paharazana miaraka amin'ny fanaraha-maso ny famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro, izay manome vahaolana rafitra malefaka sy azo antoka ho an'ny famatsiana herinaratra tsy tapaka ao amin'ny fianakaviana sy ny indostria.
INVT iMars BD series inverter dia taranaka vaovao vokatra fitehirizana photovoltaicenergy miorina amin'ny hevitra hoe maimaimpoana sy fikojakojana maimaimpoana, izay mampiditra asa maro toy ny famandrihana, fitahirizana angovo, photovoltaic, rafitra fitantanana bateria BMS sns. Izy io dia afaka mamantatra ho azy ny maody offgrid / grid ary mampifandray amin'ny kiran-tsaina mba hahatratrarana ny tampon'ny lohasarana sy ny lohasahan'ny fangatahana.